I-Semalt Islamabad Expert: Indlela Yokuvimbela I-WP Referrer Spam Ku-Google Analytics
Ugaxekile wokudlulisela ku-Google Analytics useyinkinga ebalulekile. Ngenxa yesigameko se-spam yokudlulisela kusuka kumawebhusayithi amakhulu nabantu abaxhumana nabo, abakwa-webmasters baye baqedwa yizihlungi ezihlukahlukene futhi basebenzisa ezinye izindlela ukuvimbela ithrafikhi eliphansi kakhulu ekubhubhiseni amasayithi abo.
Asikho isidingo sokwethuka njengoba kungenzeka ukuvimba ugaxekile we-WordPress wokudlulisela ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics. U-Sohail Sadiq, isazi esihamba phambili esivela ku Semalt , utshela lapha ukuthi uzokwenza kanjani lokhu ngempumelelo.
Ukuqalisa nge-Google Analytics
Uma ngabe iwebhusayithi yakho ithola izimoto eziningi futhi ubona izixhumanisi ezithile zogaxekile ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics, ungaqeda lezo zixhumanisi ngoba zingakuholela ekuchofozeni kumawebhusayithi angalungile. Uma ngabe awuzange usebenzise i-Google Analytics kuwebhusayithi yakho ye-WordPress ngaphambili, kufanele ufake i-plugin ye-WordPress bese uyihlanganisela ku-akhawunti yakho ye-analytics.
i-Google Analytics ithuluzi elimangalisayo nelusizo elikuvumela ukuthi ubone ukuthi izivakashi zixhumana kanjani namakhasi akho wewebhu. Ungahlola nokuthi yimaphi amakhasi abasebenzisi abathanda kakhulu, angakwazi ukulandelela ukuchofoza kuzixhumanisi zakho futhi enze imisebenzi efana nayo.
Uma ufuna ukuthi isayithi lakho liqaphele, qiniseka ukuthi ukhiphe ugaxekile we-referrer kusuka kusayithi lakho. Abakwa-spammers bokudlulisa abasebenzisi kanye nabaduni bayasebenziseka isifiso sakho futhi bathumele ama-URL wokudlulisela ama-script ngokuzenzakalela amakhulu ukuya ezinkulungwaneni zamabhulogi namawebhusayithi nsuku zonke. Lawa ma-URL avela kuma-akhawunti wakho we-Google Analytics namanye amasevisi ngesikhathi esithile. Uma ucabanga ukuthi bayothinta isimo sakho sesayithi, kufanele uhlole izindlela zokuziqeda ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Ngingabhekana kanjani ne-Referrer Spam?
Ungasebenzisa i-Sucuri ukuqapha ukuphepha kwewebhu..I-Sucuri ivikela kuphela isayithi lakho ngokumelene ne-Trojans ne-malware kodwa ivimbela ukugaxekile kokudlulisela unomphela. I-Sucuri Iwebhusayithi ye-Firewall ingenye ye-WordPress engcono ongayisebenzisa ukuqeda ugaxekile we-referrer. Ithimba layo lizinikezele futhi lisebenza kanzima, futhi amakhasimende anikezwa ngemininingwane yokuthi amasayithi abo athuthukisiwe kanjani.
Vimbela ukudluliselwa kogaxekile ku-WordPress nge-Plugin
Enye indlela yokuvimbela ugaxekile wokudlulisela kwiwebhusayithi yakho ye-WordPress ngokusebenzisa ama-plugin ehlukene e-WordPress. Lawa ma-plugin anezinketho eziningi, futhi ungawasebenzisa ukuze uvimbele ukugaxekile kogaxekile. Into yokuqala okufanele uyenze ukulandwa, ukufaka nokuvula i-plugin efanele, futhi sikisela ukuthi usebenzise i-plugin ye-SpamReferrerBlock. Uma isebenze ngokugcwele, kufanele uhambe ku-Izilungiselelo »Ukudlulisa umyalezo wokugaxekile futhi ulungise izilungiselelo zalesi plugin ukuze uqalise.
Vimbela ama-Ghost Referrals ngezihlungi ze-Google Analytics
Ungavimbela ugaxekile we-referrer ngezihlungi ze-Google Analytics. Uma abakwa-spammers bakuthumela izicelo eziqhubekayo, kungenzeka ukuthi balandele amakhodi wakho wokulandelela we-UA. Basebenzisa le khodi ukuthola i-niche nemvelo yewebhusayithi yakho. Abaningi be-webmasters bangezela izihlungi kuma-akhawunti wabo we-Google Analytics, lapho kufaka khona amasayithi asolisayo bese uwaqeda kungakapheli imizuzu. Yiya ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics uphinde uye kusigaba seNethiwekhi yezobukeli »Ubuchwepheshe». Lapha kufanele ukhethe i-Hostname njengengqikithi eyinhloko bese uzama ukwandisa imiphumela kwikhotho yenyanga. Ezinye zamagama wesizinda okumelwe wengeze lapha yi-wpbeginner.com, darodar.com, nabanye.
Ungaphinde uvimbele ugaxekile wokudlulisela ovamile nge-Google Analytics. Iya kokukhethwa kwezinto ezihlungiwe ku-akhawunti yakho yakwa-Google Analytics bese uvimbela ama-URL njengezinkinobho-for-website.com, blackhatworth.com, darodar.com, ne-anticrawler.org.